Saraakiil Iiraaniyiin Ah Oo ku dhintay Duqeymo ka dhacay Xammaah iyo Xalab. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Apr 30, 2018 946 0
Saldhigyo dowladda Iiraan iyo malleeshiyaadka Nidaamka Suuriya ku leeyihiin gobollada Xammaah iyo Xalab ayaa la kulmay weerar culus oo duqeymo ah, kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacyo ah.
Saldhig ku yaala nawaaxiga magaalada Xammaah oo lagu qaabilo malleeshiyaadka cusub ee shiicada ah, islamarkaana doonaya iney ka qeybgalaan dagaalka Suuriya ayaa kamid ah meelaha la duqeeyey, islamarkaana khasaare adag uu ka dhashey.
Warbaahinta qaar ee dowladda Iiraan ayaa shaacinaya in inkabadan 20 ruux oo u badan taliyaal iyo saraakiil ciidan oo Iiraaniyiin ah ku dhinteen duqeymaha ka dhacay xarumaha milliteri ee dowladda Iiraan ee dalka Suuriya.
Waxaa jira warar kaloo sheegaya in waxa dhacay ay ahaayeen qaraxyo ka kacay gudaha saldhigyada, lana ogeyn waxay yihiin.
Wakaaladda wararka ee Nidaamka ayaa waxa dhacay ku tilmaamtay howlgal cadowtooyo oo cusub, islamarkaana lagu soo qaaday saldghiyada ciidamada Nidaamka uu ku leeyahay gobollada Xammaah iyo Xalab.
Websitae laga leeyahay wadanka Suuriya, islamarkaana taageersan kacdoonka shacabka ayaa shaaca ka qaaday in dhimashada marka la isku daro ay gaareyso 38 ruux, halka dhaawacyadana ay gaarayaan 57 ruux, dhamaantoodana waa ciidamo iyo saraakiil katirsan dowladda Iiraan iyo maamulka mujrimka Bashaar Al-Asad.